E14 15W Mhlophe komlilo Ama umshini Lamp RoHS CE 110-130V 220-240V - China Haimen Xinrong Electric
E14 X555-54 High lokushisa Ukumelana umshini Lamp Ho ...
G9 WGB-A umshini ngesitimu Lamp Umnikazi CE T300 okuphezulu Tempe ...
E14 15W Mhlophe komlilo Ama umshini Lamp RoHS CE 110-130 ...
G9 18-40W Halogen Ama umshini Lamp RoHS CE umshini Stea ...
E14 18-40W Halogen Ama umshini ngesitimu Lamp T300 High ...
E14 15W Mhlophe komlilo Ama umshini Lamp RoHS CE 110-130V 220-240V
Xinrong Electric futhi ukukunikeza intengo engcono e14 15W isibani kuhhavini China.Welcome ukuthenga 15 watt isibani yethu kuhhavini. Lolu hlobo isibani kuhovini cleaner noma umjovo ne igesi ngasebenzi, futhi sisebenzisa i-glue amazwe, ukumelana okusezingeni eliphezulu lokushisa nokunamathisela ngomthofu kanye lokushisa eliphezulu izinto amelana ukuklama isibani ukuze eqinisekisa yethu kuhhavini isibani e14 15W izophela Whirlpool test umbuthano Thermal e-300 ° C lokushisa eliphezulu circumstance.So Xinrong Electric isinqumo esakho ohlakaniphile ukuthi kuhhavini light isibani noma Ove ...
Inkokhelo Imigomo: D / A, D / P, T / T
Xinrong Electric futhi ukukunikeza intengo engcono e14 15W isibani kuhhavini China.Welcome ukuthenga 15 watt isibani yethu kuhhavini. Lolu hlobo isibani kuhovini cleaner noma umjovo ne igesi ngasebenzi, futhi sisebenzisa i-glue amazwe, ukumelana okusezingeni eliphezulu lokushisa nokunamathisela ngomthofu kanye lokushisa eliphezulu izinto amelana ukuklama isibani ukuze eqinisekisa yethu kuhhavini isibani e14 15W izophela Whirlpool test umbuthano Thermal e-300 ° C lokushisa eliphezulu circumstance.So Xinrong Electric isinqumo esakho ohlakaniphile ukuthi kuhhavini light isibani noma kuhhavini isibani umnikazi!
Umkhiqizo Isithombe 15 watt kuhhavini isibani
Umkhiqizo Imininingwane ka e14 15W isibani kuhhavini
We khiqiza ezimbili izinhlobo e14 15 watt isibani kuhhavini: e14 25W T300 110-130V futhi e14 15W T300 220-240V isibani kuhhavini
Siyakwamukela ukuthenga noma wholesale izinga okusezingeni eliphezulu futhi iqine Thenga e14 ama enziwa e China kusuka embonini yethu. Xinrong Electric ungomunye ehola abakhiqizi ezinjalo kanye nabaphakeli e China. Futhi service ngezifiso kanye isampula khulula ayatholakala.
Previous: G9 18-40W Halogen Ama umshini Lamp RoHS CE umshini ngesitimu Ama
Okulandelayo: E14 25W Mhlophe komlilo Ama umshini Lamp T300 RoHS CE 110-130V 220-240V ngokwezifiso
1. izingxenye ababuthelwa futhi ekhiqizwa yinkampani, ngakho kungcono kakhulu ukulawula kokubili izindleko kanye nekhwalithi;
2. uhlelo inkampani Qedela, inqubo zezimboni ephelele;
3. Thina nakho futhi ahlinzeke imikhiqizo izinkampani eziningi;
4. isitifiketi Qedela ukuqinisekisa izinga umkhiqizo;
5. Perfect ngemva - yokuthengisa service ukwaneliseka ikhasimende.
Haimen Xinrong Electric Co., Ltd esungulwe ngo-1999, nomakhi professional ezikhethekile ucwaningo, ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa kuhhavini isibani umnikazi.
Sinikeza izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba kuhhavini isibani umnikazi, yethu kuhhavini isibani umnikazi ngokuvamile asetshenziselwa kuhhavini igesi, okumsulwa umusi kuhhavini, umusi kuhhavini, kuhhavini ukukhanyisa zalapho.
Siyakwamukela ukuthenga noma wholesale izinga okusezingeni eliphezulu futhi iqine ukuthenga kuhhavini isibani umnikazi enziwa e China kusuka embonini yethu. Xinrong Electric ungomunye ehola abakhiqizi ezinjalo kanye nabaphakeli e China. Futhi service ngezifiso kanye isampula khulula ayatholakala.
15W 25w T22 umshini Bulb Sebenzisa Ukuze Salt Izibani
15W E14 Sula umshini Ama
15W E14 umshini Bulb
300 Degree umshini Bulb
Sula Glass umshini Ama
E14 Salt Lamp umshini Bulb
E14 Salt Lamp umshini Bulb T22 230V 25w
Easy Bhaka umshini Khanyisa Bulb
Electrolux umshini Halogen Khanyisa Bulb
Heat Risistant Ama Ukuze umshini
lokushisa High Mhlophe komlilo Khanyisa Ama
Mhlophe komlilo Bulb Lamp Umnikazi nokufaka
microwave umshini Bulb T22 umshini Bulb
umshini Khanyisa Bulb For Sale
umshini Khanyisa umshini Bulb Shona Flat Lamp E14 Umnikazi
umshini Izingxenye Khanyisa Bulb
Quality bobumba umshini Bulb Umnikazi
yomiselela Bulb umshini
Steam Khanyisa Ama
kuphi Thenga umshini Khanyisa Bulb
Isitolo esidayisa yonke impahla umshini Ama
Isitolo esidayisa yonke impahla umshini Khanyisa Bulb
E14 25W Mhlophe komlilo Ama umshini Lamp T300 RoHS ...